လမင်းခင်: May 2009
ဒီပဲယင်း ဖြစ်စဉ်ကကဲ့သို့့ရာဇာလီအစ္စမေး(လ်)ကို မျော်သလို မမျော်မိကြဖို့ 
မနက် ဖန် ဒီပဲယင်းနှစ်ပတ်လည် နေ့ နော် - အန်တီစု က အာရုတော်ဝင်ဆေးရုံတက်ရစဉ် က ပြောဖူးတယ်
ဒီပဲယင်းမှာဝါးရင်းဒုတ်နဲ့ ရိုက်တဲ့သူတွေကိုအရေးမယူပဲ နဲ့ကျမဆေးရုံတက်နေရလို့ ကလေးတွေ က
ပန်းစည်းကိုင်ပြီး ဆုတောင်း နေတာ ဖမ်းရဲရင်ဖမ်း လိုက် ပါ --ဆိုပြီး ကျမတို့ ကို အကာအကွယ်ပေးခဲ့ တယ် ။
ခေါင်းဆောင် ကို ဘယ်သူတွေအကာအကွယ်ပေးမလဲ?
ဒီကိစ္စ ကို ကျမ ကိုဆောင်းပါးရေးတင် ပါ အမ ဆိုပြီး ပြည်ပရောက် NLD မြို့ နယ် လူငယ် တစ်ယောက် က
ပြောဖူးတယ် ခုလည်းပါတီလူငယ်တစ်ချို့ က အာရှတော်ဝင် မှာလှုပ်၇ှားခဲ့တဲ့အဆင့်တောင်မရောက်ဘူးအမ
ရေ နည်းနည်းပါးပါး ရေးပါဦးဆို လို့ကျမ တစ်နာ၇ီအတွင်းသတိရသလောက် ရေးချလိုက်ပါတယ်။
ကျမကလည်းစာရေးသာမကောင်းတာ ရေးလိုက်ပြီဆိုရင် အားမနာလျှာမကျိုး ရေးတက်တဲ့အကျင့်ရှိလေ
တော့ မရေးရင်လည်းမရေးတာကောင်းတယ် ရေးမယ် ဆိုရင်တော့ ---ဒီလိုပဲပေါ့
ဒီပဲယင်း ဖြစ် ပြီဆိုတာနဲ့ကျမ ညတွင်းချင်း သမိုင်း ဘုရားလမ်း အဆောင်ကနေ မြို့ ထဲ က ရဲဘော်တွေဆီ
ပြေးထွက်ခဲ့တယ် တို့ တစ်တွေဘာလုပ် ကြမလဲပေါ့ ။ ပါတီမှာ သိတ် တက်ကြွပြီးအရည်အသွေးရှိတဲ့လူငယ်
တွေကို ၂၀၀၂ နှစ်ကုန် ကျမ ထောင် က ထွက်တော့ ရင်းနှီးခွင့်ရပြီး စုစည်းမိခဲ့ကြတယ် ။ သူတို့ တွေ ကျမ
ထက် ပညာတက်တယ် အတွေးအခေါ်ကျမထက် ရှေ့ကိုသွားနေတယ် တကယ့်ကို အမြင်ကျယ်တဲ့ လူငယ်
တွေပါ ။အတွေ့အကြုံနဲ့ ကျော်ဖြတ်မှု များတဲ့ကျမ ကို သူတို့ဦးဆောင်ခွင့် အမြဲလို ပေးခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒီ့လူ
ငယ်အားလုံးဟာ မြို့ နယ်ခေါင်းဆောင်တွေကြည့်ပါ ။
ဒီတော့ ဒီအင်အားရှိတယ်ပေါ့ - တို့ တစ်တွေထွက်တိုက်မှရမယ် ဆိုတာ တစ်ပြိုင်နက် တွေးမိ ခံစားမိပြီး
မနက် ကို တစ်နေရာမှာ မီတင်ခေါ်လိုက် ကြတယ် အဲဒီ့မှာကျမတို့ ခြေလှမ်းတွေကို တွန့် သွားစေမဲ့ ကိစ္စ
ရပ်တစ်ခု လူငယ်ထုထဲကို တစ်ယောက်က ပစ်သွင်းလိုက်တယ် ဘာလဲဆိုတော့ - ၂၀၀၃ ဇွန် ၆ရက်နေ့ 
ကို ရာဇာလီအစ္စမေး မြန်မာပြည်ကိုလာမယ် အန်တီတို့ တို့ ကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စ ဖြေရှင်းမှာ
အသေအချာပဲ လူငယ်တွေကျွံလို့ မှားသွားရင် အင်တာနေရှင်နယ် က ၀င်မဲ့ကိစ္စ ထိခိုက်သွားမယ် ရာဇာလီ
ကိုစောင့်ပါဦးတဲ့ အဲလိုတားတဲ့သူက စေတနာပါပါတယ် ခုထောင်ထဲ ရောက်နေလို့ သူ့ နာမည်တော့
ဒီလို ဒါ့ကြောင့် ရယ် ကျမတို့ ခေါင်းဆောင်အရိုက်အနှက်ခံ အလုပ်ကြံ ခံရတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာ အင်တာနေ
ရှင်နယ် ကိုစောင့်ခဲ့လို့ အလွဲကြီးလွဲခဲ့ဖူးပါတယ် ။အဲဒီ့လူငယ်တွေ မတိုက်ရဲပါဘူးကွာ လို့ မပြောနဲ့ ခု သူတို့ 
အားလုံးနီးပါး နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ထောင်ကျသွားခဲ့ကြပါပြီ ။
ရာဇာလီကို ဇွန် ၆ ဘာများလုပ်ပေးမလဲ စောင့် တာ ၂၀၀၃ ဇွန် ၆ သာကျော်သွားတယ် --
ရာဇာလီအစ္စမေး(လ်) ဘန်ကောက်ရောက် နေပြီ
ရာဇာလီအစ္စမေး(လ်) အမေရိကရောက်နေပြီ ဆိုပြီး ထောင်ထဲ ကနေ မျော်နေကြ ကြားနေကြရပုံ (ပြီးတော့ ဘာမှမဟုတ်တာကို) ဟာသနှောပြီး
ကျမတို့ လည်း သွေးပူနေတုန်း အင်အားကို အင်တာနေရှင်နယ်အားမျော် ပြီးထိမ်းလိုက်မိလို့ဒီပဲယင်း
ကိစ္စ ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ရပါဘူး။ လူငယ်ဆိုတော့ နည်းလမ်းရှာပြီးတော်လှန်ဖို့ ပဲ စဉ်းစားခဲ့ကြ တာပေါ့။
တို့ လူငယ်တွေဘာလုပ်ကြမလဲ စည်းဝေးလိုက်တော့ သန်းရွှေကိုစာပို့ မယ် ပါတီလူငယ်တွေရသလောက်
စုပြီးလက်မှတ်ထိုးမယ် ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် ကျတယ် ။
ကျမသတိထားမိသလောက်တော့ ဒီလောက်ခက်ခဲကြပ်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကျမတို့ ပါတီလူငယ်
အင်အားသာ လမ်းမပေါ် ဘုရားပေါ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှစုဖွဲ့ မှု ရှိခဲ့တာပါ ။
သန်းရွှေဆီစာပို့ ရတဲ့အခက်အခဲကို ခု အမေရိကရောက်နေတဲ့ ကမာရွတ်လူငယ်တာဝန်ခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့
ကိုစိုးသန်း ဆိုမေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကမှတ်ပုံတင်မရှိဘူး သူ့ မှတ်ပုံတင် နဲ့စာတိုက်ကြီးမှာနှစ်ယောက်
Register လုပ်ရတာရင်ထဲမှာတော့တဒိတ်ဒိတ်ရယ်နဲ့အဲဒီအချိန် မှာ ထောင်ထွက် နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့
ကိုစိုးသန်းနဲ့ ကျမ ဟာ ကံမကောင်းရင် ဒီနေရာကနေပဲ ထောင်ထဲပြန်ဝင်ရမယ် ဆိုတာ နားလည်ပြီး
သားပါ။ စာတိုက်ဝန်ထမ်း က စာကိုယူပြီး ချက်ချင်း Register မလုပ် ပေးပဲစောင့်ခိုင်းပြီး အထဲဝင်
သွားတော့ ကျမ ခေါင်းနည်းနည်းကြီးသွားပါတယ် စိုးသန်းစိတ်ထဲ မှာလည်း ကျမလောက် မဖြစ်ရင်
တောင် စိုးရိမ်မှုတော့ ရှိနေမှာပါ ။ ဒါဟာ ဒီပဲယင်းဖြစ် ဖြစ် ပြီးချင်း ပါတီလူငယ် တွေရဲ့ပထမဆုံး
လှုပ်ရှားမှုစလိုက်တာပါ လူငယ်တွေက ထင်တာထက် စည်းရုံးကြပါတယ် ရန်ကုန်တတိုင်းလုံးအပြင်
ဧရာဝတီ။ပဲခူး တို့ ကပါ ဆက်သွယ်လာပြီး ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုး မစ္စတာကိုဖီအာနန် ဆီစာပို့ 
တယ် ။ အာစီအမ် အဖွဲ့ ကိုစာပို့ တယ် ။ အေပတ် အစည်းအဝေးကိုစာပို့ တယ် ။
သာမာန် စာမဟုတ်ပါဘူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုဒီပဲယင်း မှာလုပ်ကြံမှုကိုအရေးယူပေးဖို့ တင်ပြတဲ့
လူငယ်ထုလက်မှတ်တွေနဲ့ စာတွေပါ ။ ဒီလှုပ်၇ှားမှုတွေအားလုံးအတွက် အများဆုံးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့
သူတွေထဲမှာ ခုထောင် ၂၀ နှစ်နဲ့အထက် ကျနေတဲ့ ကိုသူရိန်အောင် နဲ့ကိုကျော်ကျော် ပါ ဒါ့အပြင် ပါတီလူငယ်
အဟောင်းထဲက ရံရွှေလည်းတက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလိုအမြဲတစေ လှုပ်ရှားမှု အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ လူငယ်တွေ ရဲ့နှလုံးသားထဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံတက်ရတဲ့သတင်းဆိုးဝင်လာပါတော့တယ် အားလုံးလိုလိုမျက်ရည်တွေစို့ လို့ရယ်ပေါ့ ။
ကျမချက်ချင်းအာရှတော်ဝင် ဆေးရုံကိုပြေးတော့ ဟုတ်နေပါသည်။ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း အန်တီ့ကိုခွဲစိတ်ပြီး
Major Operation ဖြစ်ပြီး သုံးနာရီလောက်ခွဲစိတ်လိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းဖို့ 
ဆင်းလာချိန်မှာ ကျမနဲ့အတူလူငယ်အနည်းငယ် သာရှိတာ ကျမရင် ထဲအတော်နာကျင်သွားခဲ့ပါတယ် ။
(အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံရှေ့မှာ အန်တီ့အမှာစကား ဒေါက်တာမှတဆင့်)
ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လုံးခွဲစိတ်နေရချိန်မှာပါတီ က ရန်ကုန်တတိုင်းလုံးတော့အနည်းဆုံးရှိနေသင့်
ပါတယ် ။ ထားပါတော့ သတင်းအဆက်ပြတ်တယ်ပဲ ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ နောက်နေ့ တွေမှာရော--------?
ဒါ့ကြောင့် ကျမ တို့အာလိန်ငါးဆင့် ဘုရားမှာ မီတင်ထိုင်ပြီး ဆန္ဒပြ ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် ဆန္ဒပြတယ်
ဆိုတာဒီမိုကရေစီရဲ့ လေးနက်တဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုပါ ။အန်တီဆေးရုံတက်ရတဲ့အတွက် အန်တီ့အတွက်
ဆုတောင်းနေတယ် ဆိုပြီး မြို့ နယ်လူငယ်တာဝန်ခံ ၂၀ နီးပါးဟာ မြေကြီးမှာ တင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင်ပြီး
Silence Strike လုပ်ခဲ့ကြပါတယ။
အဲဒီမှာ ပါတီရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံဆရာဝန်တစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ကျမ ကို တားပါတယ်။ဒီ့အပြင် အောက်ဗမာ
ပြည်လူငယ်တာဝန်ခံအဟောင်း ကိုခင်ထွန်း ဆိုသူ (စစ်အုပ်စုကိုကျနော်တို့ အစိုးရပါလို့ အင်တာဗျူးလုပ်သွားခဲ့တဲ့)
က ကျမ ကို ပါတီ က အရေးယူရလိမ့်မယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲလုပ် လို့ ဆိုပြီး “ဆန္ဒပြတာပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်လိုသေးလားရှင်”
အဲဒီ့မှာ တစ်ချို့ရုံးဝန်ထမ်းသဖွယ် ပါင်္တီ မှာရှိနေသူတွေ နောက်ဆုတ်သွားပါတယ်။ လူငယ်အမျိုးသမီး
အသစ်တစ်ချို့ ကျမ ကိုအတိုက်အခံလုပ်လာပါတယ် အန်တီကခွဲစိတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ ကို အန်တီပို ပြီး
စိတ်ထိခိုက်အောင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အသံတွေ မျိုးစုံထွက်လာပါတယ် ။
(ကလေးတွေကိုတော့ နိုင်ငံရေးနားမလည်လို့ ပဲလေလို့ ကျမနားလည်ပေးပြီး) အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်
ခေါင်းဆောင် နာမည်ခံသူတွေ ကိုတော့ကျမ ဂရုကိုမစိုက် ခဲ့ပါဘူး “ပြီးမှပါတီက ထုတ်ထုတ်လေ ခုပွဲဖြစ်
အောင်လုပ်မယ်” ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး အာရှတော်ဝင်ရှေ့ ကဆန္ဒပြ မှု ကို ဆက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
အာဏာပိုင်တွေဘာလုပ်ရမှန်းမသိပါဘူး ။ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကိုညှိပါတယ် မလုပ်ကြဖို့ ပေါ့ ဆရာက
အန်တီ့သဘောထားမေးတော့ ကလေးတွေခုလို ဆုတောင်းဆန္ဒပြုနေတာ အန်တီထောက်ခံတယ်
ပြောပစ်လိုက်ပါတယ် ။ကျမတို့လည်းတနေ့ ထက်တနေ့ အဆင့်တိုးပြီး မတ်တပ်ရပ် အန်တီ့ ဓါတ်ပုံကိုင်
အင်အားတွေလည်းတနေ့ ထက်တနေ့ ပိုပို တိုးလာခဲ့ပါတယ် ကျမတို့ ဆုတောင်းရာမှာကိုင်ထားတဲ့ပန်း
တွေကိုဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက လာယူသွားပြီး အန်တီ့ဆီပို့ ပါတယ် အန်တီက ကျမတို့ နဲ့ အတူရောက်
လာတဲ့ပရိတ်သတ်ကိုမုန့် တွေ ပြန်ပို့ ပေးပါတယ် ။
အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ ရှေ့ လမ်းမက ကားတန်းတွေ ကကျမတို့ ကိုအားပေးခဲ့ကြတယ် တစ်ချို့ အစိုးရ
အရာရှိအရာခံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတောင်ကျမတို့ ရခဲ့ ပါတယ်။ ဒါကို လန့် ဖြန့် နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေက
အချုပ်ကားကို မလှမ်းမကမ်းမှာရပ်ပြီး ဖမ်းမယ် ဆီးမယ်ခြိမ်းခြောက် လူစုခွဲခိုင်း ဆေးရုံပေါ်မှာရှိတဲ့
“ဒီပဲယင်းမှာဝါးရင်းဒုတ်နဲ့ ရိုက်တဲ့သူတွေကိုအရေးမယူပဲ နဲ့ကျမဆေးရုံတက်နေရလို့ ကလေးတွေ
က ပန်းစည်းကိုင်ပြီး ဆုတောင်း နေတာ ဖမ်းရဲရင်ဖမ်း လိုက် ပါ” လို့ အန်တီ ပြောတဲ့အခါ ထောက်လှန်း
ကျမတို့ ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကို ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ ရပ်တည်ပေး
ခဲ့ကြတာနမူနာ တစ်ခုအနေနဲ့ ကျမတင်ပြတာပါ။ကျမတို့ တတွေပြည်ပကနေ အလကားတွန်းအားပေး
ပြီးအော်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ကျမ တို့ ကျော်ဖြတ် ခဲ့ ကျမ တို့ကိုယ်တိုင် ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီး ထောင်
နှုတ်ခမ်းတွေ နင်း ခဲ့တဲ့အတွေ့ အကြုံတွေ အရ စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားရယ် နောက်ပြီး သိတ်တွေးတက်
်ကြောင်တက်တဲ့သူတွေကြောင့် ရာဇာလီအစ္စမေး(လ်) ကိုမျော်သလို မျိုးနောက်ကျခဲ့ရတာတွေရှိသလို
ပါတီထဲ က ဓါးလှံတွေ နေရာမတ်သူတွေ ရဲ့ ထိမ်းချုပ်မှုအောက်မှာ ကျမတို့ ပန်းတိုင်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
နောက် ထပ်တစ်ခုပြောချင် တာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူငယ်ကိုသိတ်ယုံတယ်သိတ်ကိုအားကိုး
တယ် လူငယ်ကို ဘယ်တော့ မှမကျွံ နဲ့မပြောဘူး စေတနာမှန်ရင် ညွှန်ကြားချက်
တောင်းစရာတောင်မလိုဘူးဆိုတာ ၁၉၉၆ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ပါတီရုံးမှာ လူငယ်အားလုံးကို
စုရုံးစေပြီးပြောခဲ့တယ် ပြောဖြစ် တဲ့အကြေင်းရင်းကလည်း ၁၉၉၆ ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုမှာပါတီလူငယ်
ကျမတို့ အနေဲ့ ပါဝင်သင့်မသင့် ညွှန်ကြားချက်တောင်းမိလို့“အလုပ်မလုပ်ချင်ရင်ညွှန်ကြားချက်ကို
တောင်းကြတယ်” “ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လက်ထက် က လူမိုက်အလိုရှိတယ်” ဆိုတာ ကိုသာဓက
ပြပြီးပြောခဲ့တယ် လူမိုက်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက် မိုက်မိုက်မဲမဲ အသက်ပေး ရဲတာမျိုး ကိုဆိုလိုတာပါ ။
ဒါကြောင့် ပါတီလူငယ်ကောကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုပါ လူငယ်ဘ၀ဟာရဲရင့်ဖို့တက်
ကုန်လွှင့်ဖို့ အသင့်ဆုံးအချိန်ပါ ။ကျမတို့ လည်း မိုက်မိုက်မဲမဲတက်ကုန်လွှင့် ခဲ့ကြတာပါပဲ အပြင်ကနေရေး
ပြောနေလို့မင်းတို့ လာလုပ်ပါလား ပြောရင် ဆောရီးပါ ကျမ တို့ကျောင်းသားဘ၀ ပြောက်ကျား နည်း
ပါတီဝင်ဘ၀ မှာလည်း အဟိံသ နည်း တွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ ထောင်ကျတာနဲ့အချုပ် ဘ၀တွေ အကြိမ်ကြိမ် ရှိပြီး
နေလို့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်း တိုက်တွန်းတယ် အားပေးတယ် လုပ်သင့်တဲ့ပုံစံတွေ ပြောပြပါတယ်။
ဆရာတော့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်လည်းတာဝန် လုံးဝမကြေသေးဘူး
ဆိုတာသိနေပါတယ် ။ဒါကြောင့် မျိုးဆက်သစ်တွေကိုပဲ ကျမ တို့ အားကိုးပါရစေ ရဲရင့်တက်ကြွပြတ်သား
ထက်မြတ်ကြပါ ထောင်ဆိုတာ မင်းဆိုးမင်းညစ်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ပြတိုက်ပါပဲ။
ရာဇာလီကိုမျော်သလို ဘန်ကီမိုး တို့ အိုဘားမား တို့ ကိုမမျော် ပါနဲ့ခေတ်တခေတ်မှာ သူရဲကောင်း
တစ်ယောက်ပဲ ထွက် တဲ့ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ သူရဲကောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မနက်ဖန်
ဒီပဲယင်း(၃၀) ကို ပြန်လည်စိန်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့တစ်နိုင်ငံလုံး စုရုံးကြပါ။အန်တီကလေ လူငယ်တွေ
ဘာများလုပ်နေလဲ ညမအိပ်နိုင်ပဲတွေးနေတာ သူမျော်လင့်တာ အနာဂတ်ကို ပိုင်တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့
ကြွေးကျော်သံ နဲ့အာဏာရှင် ကို ဖြုတ် မဲ့ လူငယ်ထု လက် ပဲ -- ဒီနှစ်ဟာ ကျမတို့ အတွက် စနစ်ပြောင်း
တော်လှန်ရေးအပြီးသတ်ရမဲ့နှစ် ဖြစ်မှာအသေအချာပါ ။
အာရှတော်ဝင် ရှေ့ ဆန္ဒပြမှုကို တာဝန်ယူရေးသားပါသည်
Posted by LRDP at 6:26 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 6:37 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 6:27 PM0comments Links to this post
လူအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းအပိုဒ် ၁၁ ကို ချိုးဖောက်ပြန်တယ်
Posted by LRDP at 6:09 PM0comments Links to this post
မင်းဆိုးမင်းညစ်ဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံ အံတုနေရတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
သဘာပတိမိန့် ခွန်း ( မေ-၂၇)
Posted by LRDP at 7:20 PM0comments Links to this post
ပါတီဌါနချုပ် မှ ယနေ့ရွှေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည် ကြေညာချက်
Posted by LRDP at 2:22 AM0comments Links to this post
ရွှေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့ မဲဆောက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြ
မေ (၂၇) မှာပြည့်သူ့ ပါတီ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေ ကိုပြည်သူက တစ်ခဲနက် မဲပေးခဲ့ ကြတယ်
အနီရောင် - ရဲစိတ်ရဲမာန် ထက်သန်သည့် နိုးကြားတက်ကြွအဓိပါယ်
ကြယ်ဖြူ - နယ်ချဲ့နဲ့ ဖက်စစ်ဆန့် ကျင် သည့် အဓိပါယ်
ရွှေဝါခွပ်ဒေါင်း - ကျောင်းသားတို့ ရဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ လက္ခာဏာ
ပါတီရုံးချုပ်တွင် သတင်းထောက်များ နှင့် အကျဉ်းထောင် မတရားရုံး အခြေအနေ မေးမြန်းစဉ်
ပါတီ ကြေညာချက် (၂၅-၅-၂၀၀၉)
Posted by LRDP at 8:23 PM0comments Links to this post
ကျောင်းသားကျောင်းသူများသို့ လျို့ ဆော်ပန်ကြားချက် (ဗကသ)
Posted by LRDP at 3:24 AM 1 comments Links to this post
Posted by shwenanda at ထံမှ ဗွီဒီယိုဖိုင် ကူးယူသည်။
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသမဂ္ဂမှအဖွဲ့ ဝင်များအပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ လူငယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အားပေး
ထောက်ခံသော နိုင်ငံခြားသားများ မှ
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်မြောက်ရေး ဒို့ အရေး ”
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဒို့ အရေး”
“စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး ဒို့ အရေး ”
“ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ဒို့ အရေး”
Free Aung San Suu Kyi ဟု
ကြွေကြော်သံများ တိုင်၍ မြ၀တီတံတားထိပ်မှ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် သောင်းရင်းမြစ်ကမ်းနဘေးအထိ လမ်းလျောက်ကြွေးကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်၊ ဆန္ဒပြကြွေးကြော်သံများ ပြုလုပ်ချိန်
တွင် မြ၀တီမြို့ မှ ပြည်သူလူထုမှ မြစ်ကမ်းနဘေးသို့ စုရုံးရောက်ရှိလာပြီး လာရောက်အားပေးကြောင်း တွေ့ ရှိရပါ
သည်၊ မိနစ်အတန်ကြာသည့်အခါမှ ယိုးဒယားစစ်တပ်မှအေးဆေးစွာပြန်လှန်ကြရန်ပြောလာသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို
အေးအေးဆေးဆေး မနေချင်ကြဖူးလို့ပြစ်တင် ကောင်း ပြစ်တင် လိမ့်မယ် အေးအေး
ဆေးဆေး နေချင်ရင် ကတော့ အသူရကယ် တွေရဲ့ နေ့ တစ်ဝက် ဘ၀ ကိုသွားပါလို
့ကျမပြောချင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ဒီလောက်ဆိုးရွားတဲ့ အကြပ်အတည်း ကျမတို
ပါတီရဲ့ အသက်သွေးကြောကိစ္စ ဒါ့ထက်လူထုခေါင်းဆောင်ဟာ အင်မတန်မှာ ညစ်ညမ်း
တဲ့ အင်းစိန်ထောင် လူရှင်တွေရဲ့သင်္ချိုင်း မှာသွားနေ သွားအိပ် သွားစားရတာ ဒါကို
မခံနိုင်ဘူးငါတို့ အန်တီ့ လူဟေ့ အန်တီ့အတွက် တို့ ဆန္ဒတွေပြကြမယ် ပြရတယ် ဆိုတာ -
ဘယ်လောက်များနစ်နာသွားကြလို့ လဲ ပေးဆပ်လိုက်ကြရလို့ လဲ? တစ်ချို့ များ ငါတို့ 
အနေကြပ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ ပြောရင် ကျမ က ကော်ဆဲလိုက်တော့မယ် *****
**** ဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာသွားကြပါ နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးမလုပ်
ကြပါနဲ့ လို့--- တောင်းပန်ပါတယ် လို့ လည်း ဆဲပြောလေးပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
ခု ဆန္ဒပြတာယိုးဒယားဆိုတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားပါ တစ်ချို့ ထောက်ပြသလို မဲဆောက် က
ကန့် သတ်နယ်မြေ ။ ခရိုင်ကတိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက် အန္တယ်များတယ်ဆိုတာမျိုး
အရင်အခြေအနေတွေ အပေါ်မှာ ဆိတ်ဆိတ် နေပေးလို့ ရပေမဲ့ ခု အခြေအနေ နဲ့ 
တော်လှန်ရေး ထမင်းဟင်း အများဆုံး စားသူများ ဆိတ်ဆိတ် နေ သင့်သလား?
ဘယ်နေရာ ဘယ်ပုံစံမျိုးမဆို နဲ့စစ်အုပ်စု ကို ဆန့် ကျင်နေသင့်သလဲ?
အင်တာနက်ပေါ်ကပဲ သတင်းတွေ ဖလှယ် တကယ့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ သဖွယ်
ဟန်လုပ်နေရင်တော့ ပြည့်သူ့ အတွက် နိုင်ငံတကာ ကထောက်ပံ့ငွေတွေ ပြည်သူ
ကိုယ်စား တာဝန်ခံတောင်းစားထားသမျှ ပြည်သူထံပြန်အမ်းကြဖို့ ပါပဲ -
ဒီအချိန်မှာ ကျမ ညီညွတ်ရေးစကားပဲပြောချင်တယ် -- ဒါ့ ကြောင့် စစ်အုပ်စုကို
ဆန့် ကျင်တာဆိုဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကနေ ဘယ်သူ ဘာလုပ်လုပ်
(အမှန်တကယ်လုပ်) သူ တွေကိုကျမထောက်ခံတယ်။
တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးမယ်ဆိုသူများ အေးအေးဆေးဆေး နေ ချင်တာ
အကယ်၍ မနက်ဖန် အန်တီ့ကို အမိန့် ချခဲ့ရင်
Posted by LRDP at 11:39 PM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ထုကိုယ်စား လူငယ်လုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရေးမှသဘောထား
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်ခြံ ၀န်းအတွင်းသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ရောက်မှုနှင့်
ပတ်သတ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အစိုးရမှ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်အားအင်းစိန်ထောင်သို့ပို့ကာ ပုဒ်မ-၂၂အရ
တရားစွဲဆိုပြီးထောင်အတွင်းအကျဉ်းချရန် ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နေမှုမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊
စစ်မှန်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းနှင့် လုံးဝသွေဖီနေသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ပြုရန်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းအမေရိကန်နိုင်သား
ခြံတွင်းဝင်ရောက်သွားနိုင်မှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏လုံခြုံရေးအားတာဝန်ယူထားသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းတွင်သာ အပြည့်အ၀တာဝန်ရှိသည်။
သို့ပါသောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင် လုံးဝအပြစ်မရှိကြောင်းသိသာထင်ရှားပါသဖြင့် ပုဒ်မ ၂၂ အရ
တရားစွဲဆိုထားမှုအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ လုံးဝကန့်ကွက် ရှုတ်ချ ပါကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၁ ။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းသို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ရောက်
မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်တို့မှ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားလူသားချင်းစာနာ
ထောက်ထားမှု ကင်းမဲ့စွာဖြင့် အင်းစိန်ထောင်တွင် အကျဉ်းချကာပုဒ်မ-၂၂ ဖြင့်တရားစွဲဆိုနေမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်
၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းအမေရိကန် နိုင်ငံသား
သွားနိုင်မှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးကို အပြည့်အ၀တာဝန်ယူထားပါသည်ဆိုသော
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများတွင်သာ တာဝန်အပြည့်အ၀ ရှိပါသည်။
သို့ပါ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင် လုံးဝအပြစ်မရှိပါသောကြောင့်အာဏာပိုင်တို့မှ ပုဒ်မ-၂၂ ဖြင့်
ဧရာဝတီတိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ထုသဘောထား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေအထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတော်အား
နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၂အရ
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင်အာဏာပိုင်များမှ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီး ထပ်မံအကျဉ်းချရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည်
ဥပဒေပြဌန်းချက်များ စီရင်ထုံးများနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာ တရားခွင်သည်လည်း
အခင်းဖြစ်ပွားရာ နယ်မြေ၏ တရားရုံးတွင် မဟုတ်ပဲအာဏာပိုင်များ၏အလိုကျဖြစ်သော အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်
ဆက်လက်၍ အများပြည်သူရှေ့မှောက်တွင် လွတ်လပ်မျှတသည့်တရားစီရင်မှုမျိုးဖြစ်သည့် (Open Court)ကို အာဏာပိုင်များမှချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါရန် အတိအလင်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။
လူထုခေါင်းဆောင် နှင့် အင်းစိန်ထောင်တွင်း မတရားရုံး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၏ (၂၀)ရက် နေ့ ကြေညာချက်
Posted by LRDP at 6:35 PM0comments Links to this post
ဘယ်နေရာကဘယ်လိုတိုက်ရတိုက်ရ ပါဝင်တက်တဲ့ ခွန်မြင့်ထွန်း ဦးချစ်တင် နဲ့ အတူ အင်္ဂလန်မှ ဦးနွယ်အောင်
ဆန္ဒပြ ဖို့လိုအပ်တယ် မဲဆောက် က နိုင်ငံရေးရဲ့အဓိက ဆုံရပ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြောခဲ့တယ်
ဒေါက်တာစင်သီတာမောင် လည်း မပျက်မကွက် အန်တီ့ အတွက် အမေရိကန် ကို ပရက်ရှာပေးနေလေရဲ့
တစ်ချို့ လူငယ်တွေရဲ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေစို့ လို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုမျက်စိမှိတ်ဆုတောင်းရင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအများဆုံးရှိတာပါ အင်တာနက် ကွန်ပျူတာ တွေ အများဆုံးသုံး
နိုင်ကြပါတယ် ဒါလည်း ကိုယ့်ခွန်အားနဲ့ ရှာဖွေ ထားတာ မရှိသလောက်ပါ ရှိခဲ့ရင် လည်းတစ်ဦးနှစ်ဦးပေါ့
ဘယ်ကရလဲ မေးရင် တော်လှန်ရေးကို လုပ်နေတယ် တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့ အခွင့်
အရေးကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အတွက် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးတွေ ကနေဆင့်ကဲရောက်ရှိလာတာပါ ။
ကျမကိုယ်တိုင်ပေါ့ ထမင်းစားသမျှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျေးဇူး တွေကြောင့်ပါ တော်လှန်ရေးထဲပါတယ်
ထောင်ကျခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ အတွက် တော်လှန်ရေးဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် ရနေရှိနေတဲ့အထောက်အပံ့
တွေပေါ့။ ကျမ ဘာကိုပြောချင် တာလဲဆိုရင် တော့ လက်ရှိအခြေအနေဟာ အိမ်ခေါင်မိုး မီးတောက်
လောင်နေတဲ့အခြေအနေပါ လူထုခေါင်းဆောင် ပါတီခေါင်းဆောင် လူငယ်ခေါင်းဆောင် တတိုင်းပြည်လုံး
တင်မက ကမ္ဘာက ပါ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် လို့ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ကျမတို့ ခေါင်းဆောင်ကို တရားခံ
လို့စွပ်ဆွဲပြီး ရုံးတင်စစ်နေချိန်မှာ ပြည်တွင်းကထောင်နှုတ်ခမ်းနင်းနေရသလို ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်ကလည်း
အွန်လိုင်းပေါ်က ချက်တင်တွေနဲ့ မပြီးပြတ်ပဲ ကိုယ် အစွန်းဆုံးအထိ လုပ်ပေးနိုင်သလောက် မဟုတ်ပဲ
အားကုန် တွန်းကြရအောင် နိုင်ငံတစ်ကာကို ဆန္ဒပြ ဟေ့ လို့ အတိုက်တွန်းဆုံးက မဲဆောက် အင်အားစုပါ
မဲဆောက် မှာကြတော့ ထိုင်းအစိုးရက ဆန္ဒပြတာမကြိုက် လို့ တဲ့ ဖြစ်မှဖြစ်ရပလေ ဘယ်အစိုးရ ကဆန္ဒပြ
တာကြိုက်ပါသလဲ - သီးခြားအုပ်ချုပ်တဲ့ခရိုင်မို့ တဲ့ -- အင်းစိန်မြို့ နယ် ကတော့ ??????
ဒီတော့ကျမတိုက်တွန်းပါတယ် နိုင်ငံရဲ့ အဆိုးဆုံး အမြင့်မားဆုံးတိုက်ပွဲ တိုက်ရမဲ့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပါ
အစိုးရဖွဲ့ ထားသူများလည်းကြေညာချက်လေးနဲ့တပ်ပေါင်းစုအသီးသီးလည်းကြေညာချက်လေးနဲ့ 
မြန်မာပြည်အရေး ဒီအတိုင်းလက်နှေးနေလို့ ကတော့ ဒေါ်လာစားများအကြိုက် ရှည်လျားလိုက်မည့်ကာလ
ပေမို့ဘယ်သူမရဲ-ရဲ တို့ တတွေရဲရင့်ကြပါစို့ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ ဘာလုပ်နေသည်ကို သမိုင်းက
Posted by LRDP at 7:37 PM0comments Links to this post
မနက်ဖန် ရုံးချိန်းကို ထောင်ရှေ့မှာအင်အားသောင်းချီ၍ စုရုံးမည်
၂၀ ရက် နေ့ မှာ ၁၈ ရက် နေ့ ထက် သုံးဆ များလာမဲ့ လူထု ပါတီဝင် ကျောင်းသားတွေစုရုံးကြ
နေရာဒေသအသီးသီးကပါတီဝင်များ မိမိ ခေါင်းဆောင် ဘ၀ မိမိ ပါတီရဲ့အသက် ကို ကာကွယ်ကြ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဝင်တိုင်း စုရုံးကြ စုရပ်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးဒေသဆိုင်ရာနယ်တွေမှာစုကြ
Posted by LRDP at 6:27 AM0comments Links to this post
မနက် ဖန် အင်္ဂါနေ့အန်တီ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းနဲ့ အတူ အန်တီ့ ကိုပြန်ရအောင် တိုက်ယူကြဒီ့ထက်အင်အားပိုဖြည့်ကြ
Posted by LRDP at 4:11 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 10:42 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 9:01 PM0comments Links to this post
လူထုခေါင်းဆောင်အားရုံးတင်စစ်ဆေးထောင်ပို့ ခြင်းအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသမဂ္ဂမှရှုံ့ ချ
Posted by LRDP at 6:40 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 6:30 PM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမူ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်၊(FTUB)
Posted by LRDP at 6:06 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 2:26 AM0comments Links to this post
The official website of the New Zealand governmentMurray McCully
* Murray McCully
Posted by LRDP at 6:33 PM0comments Links to this post
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်
နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် တဦးဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက်
မူလကနဦးစတင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးကိုအစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းနေ
နိုင်ငံရေးအရ အပေးအယူပြုလုပ်သည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသူ ဖြစ်ပါသည်။ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင်
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာနိုင်ငံသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သက်ဆိုင်သူများ
ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လျက်ရှိပါသည်။
သို့ပါလျက် အာဏာပိုင်တို့က နေအိမ်အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမှ အပြီးအပြတ်လွတ်ရက်စေ့ခါနီးနေ
သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား မည်သည့်ပြစ်မှုကိုမျှ ကျူးလွန်ရခြင်း မရှိပါဘဲ နိုင်ငံတော် အား
နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ အရ
နောက်ဆုံးအင်းစိန်ထောင်အတွင်းရှိ လုံးချင်း အိမ်တအိမ်၌ ထားရှိသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
ယင်းအမှုကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စတင်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကဲ့သို့ တရားစွဲ
ဆိုခြင်းမှာမလုပ်သင့်၊ မလုပ်ထိုက်သောကြောင့်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်
၁၄ ရက်၊ မေလ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး
ငြိမ်မခံ နဲ့ တော်လှန်ကြပါ စုပေါင်းအားနဲ့အန်တီ့ ဘ၀ နဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ကြပါ
အန်တီစု ကို ယနေ့နံက်(၁၀) နာရီ အင်းစိန်ထောင်ဝန်းထဲမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေသည်။
ရှေ့နေ ဦးဥာဏ်ဝင်း နှင့် ဦးကြည်ဝင်း တို့ ကရှေ့နေလိုက်မည်ဖြစ်သည်။။
(နိုင်ငံတော် အား လျို့ ဝှက် နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ဘေးအန္တယယ်မှ ကာကွယ်သည့်)
ပုဒ်မ၂၂ နှင့် တရားစွဲ ထားသည်။။
ရဲဘော်အပေါင်းတို့ငါတို့ သည် ၈၈ ကစ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဘ၀ တွေ ပေးစတေးခဲ့
သည်။ငါတို့ ထက် ပို ၍ အဆ ရာပေါင်း ထောင်ပေါင်း များစွာသော ဘ၀နှင့်အသက် ပေး ပြီး
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးတည်ဆောက်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး ပြည့်သူ့ ရဲ့ နှလုံးသဲပွက်
အား စစ်အုပ်စု အသေသတ်ဖို့ ကြံစေနေပြီ အကျယ်ချုပ်နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေအိမ်တွင်ထား၍
အားမရ သူတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ အား အတင်းအဓမ္မ ပြီးမြောက်စေဖို့လူထုခေါင်းဆောင်ကို
ထောင်ထမင်းကျွေးဖို့ ကြံစီဆောင်ရွက်လိုက်ပြီ ငါတို့နိုင်ငံတစ်ကာကိုအားကိုးလို့ မရအိမ်နီးချင်း
တွေကလည်းသူတို့ အကျိုးစီးပွါးပဲ ကြည့်သည်ကိုယ့်ခေါင်းဆောင် ကိုယ်တွေရှေ့ကမားမား ရပ်ပြီး
စစ်အုပ်စု၏ ရက်စက်စွာ လုပ်ကြံအရေးယူမှုခံနေရပေပြီ -စုပေါင်းအားနှင့် အန်တီ့ကို ကယ်ပါ ။
လူငယ်များ အနာဂတ်က မင်းတို့ တွေရဲ့ လက်ထဲမှာရှိတာမို့ပြတ်ပြတ်ရဲရဲ အင်းစိန်ထောင် ဆီ
ချီတက် ကြ ၀ိုင်းကြ အန်တီ့ကို ပြန်လည်တောင်းဆိုကြပါ ။
အစဉ်အလာရှိခဲ့သည့် ကျောင်းသားတွေ ပါတီလူငယ်တွေ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ တွေ ရဲ့အင်အား ကို
ငါတို့ ယုံကြည်မျော်လင့်နေပါသည် ။ ရင်ထဲက ငါတို့ ၏ပူဆွေးသောကသည် မကြာမှီစစ်အုပ်စုထံ
တစ်ဖန် တန်ပြန်စေရမည် ။
Posted by LRDP at 9:43 PM0comments Links to this post
မည်သို့ ပင် တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူအတွက်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဆိုးရွားသောအခြေအနေ စိုက်ရောက်နေစေကာမူ လောဘတက်နေသောငမိုက်သားများက
အာဏာရှင်စိတ်ဓါတ်တွေမပေါ်ပေါက်ရန် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? (နိုင်ငံရေးသမား ကမ်းနားသစ်ပင်မှ)
မည်သို့ ပင် တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူအတွက်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက်
စိုးရွားသော အခြေအနေ စိုက်ရောက်နေစေကာမူ လောဘတက်နေသော ငမိုက်သားများက
အာဏာကို သဲသဲ မဲမဲ ဆုတ်ကိုင်ထားကြသည်။ ဤသို့ နှယ် အ၀ိဇ္ဇာ ကို ၀ိဇ္ဇာ ထင်ပြီးအမှောင်
ကိုဇွတ်တိုးမည့် အာဏာရှင်စရိုက်ဆိုးကိုလည်း လူတစ်စု ကိုင်ဆုတ်ထားချင်ကြဆဲရှိနေပေသည်။
ဤအကျင့်စိုးတွေမြန်မာတွေ တော်တော်များများမှာ ကူးဆက်နေပေပြီ ထိုကဲ့သို့အကျင့်ပျက်ရန်
လည်း ဗိုလ်နေ၀င်း မှ ရိုက်သွင်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါပေလော -မ ဆ လ လက်ထက်မှ ယနေ့ ထိ
ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး အထိ ပါလာမြဲပါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်မတန်မှဆိုးရွားတဲ့ 
အာဏာရှင် တွေကိုကြည့်ပါ ဥပမာ (၁) သန်းရွှေ (မြန်မာနိုင်ငံမှ)
(၂) ဟူဂျင်တောင်း (တရုတ်နိုင်ငံ)
(၃) ကင်ကျုံအီး (မြောက်ကိုရီးယား)
(၄) ရောဘတ်မူကာဘီ (ဇင်ဘာဗွေ )
(၅) အိုမာအေဘားမား (ဆူဒန်)
(၆) ကာဒါဖီ (လစ်ဗျား)
(၇) ဘုရင် အက်ဒူလာ (ဆော်ရီအာရေးဗီးယား) အီရန်
စသည့် စသည့်နိုင်ငံများမှာ အာဏာရှင်တွေ သက်စိုးရှည်နေကြပါတယ်။ဒီလို အာဏာရှင်တွေသက်စိုး
ရှည်စေမဲ့ အဓိက သော့ချက် က ဘာလဲ? လို့ မေးရင် အများစု က အာဏာဟာမက်လောက်စရာ
စည်းစိမ်ဥစ္စာ သြဇာနဲ့ ကြွယ်ဝမှုတွေကြောင့်သူတို့ တွေဟာလက်နက်တွေအဲဒီစည်းစိမ်တွေနဲ့ပဲပြည်သူ
ကိုခြိမ်းခြောက်ပြီး အပိုင်စီးထား ကြလို့ သူတို့ အာဏာကိုထိပါးရင် သတ်ပစ်ဖြတ်ပစ် ထောင်ထဲသွင်း
ပစ်လို့ ပြည်သူတွေ က အကြောက်တရားကြီးလာပြီးဝိုင်းဝန်းမတော်လှန်နိုင်ကြတာလို့ရိုးရိုးလေးပဲ
ဖြေပါလိမ့် မယ် ။
ဒီအဖြေမမှားပေ မဲ့ အဓိက ထဲမှာမပါသေးပါဘူး ။ အာဏာရှင်စိတ်တွေဖြစ်ပွါးရတာ အာဏာရှင်တွေ
နှစ်ရှည်လများ အာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တာ နောက်လိုက်တွေကြောင့် ပါဦးဆောင်သူအကြီးအကဲ
ရဲ့ အနားမှာ ကပ်နေတဲ့အကြီးအကဲ ယုံကြည်ရတဲ့သူသာ လောဘ သမား ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီ့အကြီးအကဲ
ဟာ အာဏာကို မက်မောတက်ဖို့ ဖက်ထဲပါသွားပါပြီဦးဆောင်သူအကြီးအကဲကိုအမှန်ကိုအမှန်မဝေဖန်
အကြီးအကဲအကြိုက် မြှောက်လိုက်ပင့်လိုက် ချီးမွှမ်းလိုက်တာတွေဟာ ချီးမွှမ်းမထိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဖြင့်
အဲဒီ့အကြီးအကဲ လမ်းစလွှဲပြီသာမှတ်ပါ ။
ဆင်ခြင်ထုံတရားနဲ့ မဝေဖန်မသုံးသပ် နိုင်တဲ့ အကြီးအကဲ များဆိုရင် အာဏာ ရဲ့ အရသာနွံထဲက
ဆွဲတင်လို့ ကိုမရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါ့ကြောင့်အာဏာရှင်တိုင်းရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်ရင်ဖိလစ်ပိုင်ကရားမို့ (စ်)
လိုနောက်လိုက်များပေါ်ထွက်လာရင်ဖြင့် အာဏာရှင်သမိုင်းဇာတ်သိမ်းပိုင်းရောက်ရမှာပါ ။
အဲ စကားပုံတွေထဲကလိုခွေးပြောတဲ့စကားကျားမိုက်ကယုံ လို့ ကျားမိုက် ဒုက္ခတွေ့ တာမျိုး ။
အာဏာရှင်တွေ များများပြောပြကြ နောက်လိုက်တွေကလည်း မိမိ သိထားတဲ့အမှန်တရားကို မြှောက်
လိုက်ပင့်လိုက် မှကြိုက်တက်တဲ့အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ အဇ္ဇတ္တ ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲအောင် နေအိမ်တွေ မှာ
ရုံးတွေမှာသင်းဖွဲ့ တွေမှာ ကအစ အကြီးအကဲအကြိုက် မလိုက်တက်ကြရင်ဖြင့် သင့်ရင်သင့်တယ်
မသင့်ရင်မသင့်ဘူး အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း တင်ပြရဲကြရင်ဖြင့်အာဏာရှင်စိတ်ဓါတ်တွေ တစ်စ တစ်စ
လျော့ပါးလာ နိုင်တာအသေအချာပါပဲ --
အမှတ်တရအနေနဲ့ ခြသေ့င်္ပုံပြင်လေးတင်ပြလိုက်ပါတယ် ။
ကေသရာဇာ ခြသေ့င်္မင်းဟာ သိတ်အရုတ်ဆိုးလှပါတယ် ဒါပေမဲ့သူကတော့
သူ့ ကိုယ်သူ ရုတ်ဆိုးလှတယ်လို့ မယုံကြည်ပါဘူး။ မှန်တွေ မကောင်းလို့
ခြသေ့င်္မင်းဟာ အကောင်းဆုံးမှန်တစ်ချက်ပါလာပြီး ဆက်သရမယ်လို့ ထုတ်
ပြန်လိုက်တယ်။ဒီတော့ တိရိစ္ဆန် အားလုံးဟာသူဆက်တဲ့မှန်ကအကောင်းဆုံး
ငါဆက်သတဲ့မှန်က အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ငြင်းမဆုံး ဖြစ်ကုန်ကြတော့
တယ်။ဒါပေမဲ့ မှန်တွေကောင်းလေလေ ခြသေ့င်္မင်းရဲ့ ရုတ်ဆိုးလှတဲ့ မျက်နှာ
ဟာစိတ်ဆိုးဒေါ်သဖြစ်ကာမှန်ဆက်သလာတဲ့ တိရိစ္ဆန်တွေကို ကြီးလေးတဲ့
တစ်ခုကိုဆွဲကာ ဖန်ချပ်ထဲမှာစီချယ်ထားပြီး မှန်တစ်ချက်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။။
ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ သိတ်ဝမ်းသာလာကာ ရယ်မောသဘောကျသွားပါလေရော့။
တဆက်တည်း ဒီမှန်ကမှအကောင်းဆုံးမှန်ကွ ဟုဆိုပြီးမြေခွေးကိုဆုလဒ်တွေ
ချီးမြှင့်လိုက်လို့မြေခွေးလည်းဆုလဒ်တွေရသွားသတဲ့။။
လူထုခေါင်းဆောင်၏ ကျမ်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ပါတီ ဌါနချုပ် ၏ကြေညာချက်
Posted by LRDP at 6:05 AM0comments Links to this post
လုံခြုံရေးတာဝန် ပျက်ကွက် မှု ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားသူအား မတရား တရားစွဲရန် ကြိုးစား မှု (အသရေဖျက်မှု) နှင့် သန်းရွှေ သိန်းစိန် အား တရားစွဲ မည်
မနေ့ က ည က ရှေ့နေတွေ တရားရုံး တရားရေးဝန်ထမ်းတွေ ကို စည်းဝေးပြီး ဥပဒေ ရဲ့လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းတွေ ကို စစ်အုပ်စု က ဥပဒေ၀န်ထမ်းတွေကို ညွှန်ကြားနေတာ စစ်အုပ်စု ရုပ်မြင်သံကြား
မှာကျမတွေ့ လိုက်ရတယ် ဥပဒေ ၀န်ထမ်းတွေ ကတစ်ချို့ ကလည်းမျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ နာခံနေကြ
သလို တစ်ချို့ ကလည်းပြုံးစေ့စေ့ပေါ့အင်း စစ်အုပ်စုအလိုကျတစ်ချို့ ကတော့ အားတက်သရော
မျက်နှကြောတွေနဲ့ တွေ့ ရပါတယ် မိကျောင်းမင်းရေခင်းပြဆိုသလို ပေါ့ ရှင် ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်
ဥပဒေ စာဘယ်လောက်သင်ဖူး တယ်တော့ မသိပါ ဥပဒေ အထက် မှာ အာဏာရှိနေသည်ဆိုတာ
ခုတလောမှာ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်
နေမှု ကို ထိပါးနေပါတယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံဝင်းဟာ ကျမတို့ ပါတီဝင် လူငယ်တွေ
အတွက်မစိမ်းပါဘူး။ အင်းယျားကန် နဲ့ကပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ အမြဲတစေကင်းလှည့်လှေတွေ လှည့်
ကျွန်းတွေမှာ မှန်ဘီလူးတွေကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားတာ အားလုံးသိပါတယ်။ အန်တီကိုယ်တိုင်
ကလည်း ကျမ်းမာရေးအတွက် ညနေစောင်း ၄၅ မိနစ် ခြံတွင်းလမ်းလျောက်ရုံကလွဲပြီး စာအုပ်နဲ့ 
အလုပ်နဲ့ မပြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ ။အင်းယျားကန်ကိုတောင် သူမ မျှော်ကြည့်အားရှာ
ကျမတို့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမှာလည်း ရှုပ်ရှုပ်ရှပ်ရှပ် လုပ်တက်တဲ့အကျင့်ကိုမရှိပါဘူး။
လေးနက်တည်ကြည်တဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာ ကမ္ဘာကသိပါတယ်။
စစ်အုပ်စုဟာ ၂၀၁၀ ကို အပြတ်အသတ်နိုင်အောင်လုပ်ချင်တာကတစ်ကြောင်းလူထုခေါင်းဆောင်
ကို လွှတ်ရတော့မဲ့အချိန်အခါ နီးကပ်လာတာကတစ်ကြောင်း NLD ပါတီရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်
ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလွှတ်ကို လွှတ်ရမှာဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း မို့ရမယ်ရှာအမှုဆင်
ဖို့ ကြိုးစား နေတာ ဖြစ်တယ် ဆိုတ ထမင်းစားပြီး ကြီးတဲ့သူ မြန်မာပြည်သူတိုင်းသိကြပါတယ်
ဒါ့အပြင် အန်တီ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ကျမတို့ အင်မတန်မှ ချစ်ခင်လေးစား အားထား
နေရတဲ့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ကိုပါ ဖမ်းဆီး လိုက်တာဟာ လူ့ အခွင့်အရေးကို ဗြောင်ဗြောင်
တင်းတင်းကြီးချိုးဖောက် ပြလိုက်တာပါပဲ ။
အန်တီ့ကျမ်းမာရေးအတွက် ပူဆွေးနေကြရသလို ဆရာ့ ကိုလည်း မတရားညှင်းဆဲ စစ်ဆေးနေ
မှာ ကျမတို့အင်မတန်စိုးရိမ်နေပါတယ် ။ ၁၉၈၉ ANTI LABOUR STRIKE တုန်းကဆရာ
ကိုထောင်တွင်းမှာညှင်းဆဲ ပြခဲ့တာ တွေ ကျမ တို့ မေ့ လို့ မရသေးပါဘူး ။ ဆရာဟာ မျက်
လုံးနှစ်လုံး လုံး ဖွင့် မရအောင်ဖူးယောင်တဲ့အထိ အရိုက်အနှက်ခံခဲ့ ရဖူးသူပါ ။ လူနေမှုဘ၀
အဆင့်အတန်းမြင့်မားပေမဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးတဲ့ထောင်ဒဏ် အာဏာပါးကွက် သားတွေရဲ့မတရား
ညှင်းဆဲတဲ့ဒဏ်တွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရဖူးသူပါ ။
ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကိုတောင် ဒီလိုရိုက်တယ်တွေ့ လားဆိုပြီး ထောင်ထဲကသီးသန့် တိုက်ခန်း
တွေရှေ့မှာပညာဂုဏ် နဲ့သမားဂုဏ်ကို မထောက်ထား ဆော်ကားမော်ကားပြုမူတာတွေလည်း
အမှန်တရားနဲ့လူသားတွေ ကိုစေတနာထားတက်တဲ့ဆရာ ရဲ့ရပ်တည်မှုနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့
ထောင်နှုတ်ခမ်း နား ဓါးသွားပေါ်ကနေလူထုခေါင်းဆောင်ကိုစောင့်ရှောက်ခွင့်ရယူရင်းဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ ကြီးမြတ်တဲ့ပါရမီကိုဖြည့်နေရသူပါ ။
အချိန်မရွေးဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်း နိုင်တယ် ဆိုတာလည်းဆရာနားလည်ထားပေမဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေ
တွေ နဲ့တရားဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး ဥပဒေပညာရှင်တွေကို ဥပဒေနားမလည်းတဲ့ ပါးကွက်သား
တွေ က သင်တန်း ပေးသလို ပုံစံချနေတာတော့ န အ ဖ ကို တစိုက်မတ်မတ်တိုက်လာတဲ့
တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ အနေနဲ့စစ်အုပ်စု ဘာလုပ် မယ် ဆိုတာကြိုသိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်
ရပ်တန်းက ရပ်ပြီး ဆရာတင်မျိုးဝင်း နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ ။
မလွှတ်ပေးပဲဆက်ထားရင်တော့ ကမ္ဘာခုံရုံးမှာ လုံခြုံရေးတာဝန်ပျက်ကွက်မှု ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်း
ထားသူအား မတရား တရားစွဲရန်ကြိုးစား မှု (အသရေဖျက်မှု) နှင့် သန်းရွှေ သိန်းစိန်
အား တရားစွဲ မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း သတိပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပြည်သူ နဲ့ သံဃာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကိုဆော်ကားရုံမက မြန်မာလူဂုဏ်သိက္ခါ ကို
ချတဲ့ စစ်အုပ်စု အား အမြစ်ပြတ်ခြေမှုန်းကြပါစို့။
၁၉၇၆ မေ လ (၁၀) ရက်နေ့ တွင် ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်ခဲ့သော မ ဒ တ ၏ တည်ထောင်ခြင်း
နှစ်(၃၀) ပြည့် အား ယနေ့နံန့က်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ တစ်နေရာ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။။
စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်ဥက္ကဌ မန်းဘစံ၏ မူမှာ ဖယ်ဒရယ်စနစ် ကိုသာ ဦးတည်ခဲ့သဖြင့် ယခုချိန်
ထိ မ ဒ တ ၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ဦးတည်ချက် မှာ မှန်ကန်လျှက်ပင် ရှိပေသည်။ ထို့ အပြင်
မ ဒ တ မှမွေးဖွါးပေး တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်တော်လှန်ရေးအင်အားစု မြောက်များစွာသည်လည်း
ယနေ့ အချိန်ထိ ရည်ရွယ်ချက် တခုတည်းအပေါ်မှာပင် ခိုင်ခိုင် မတ်မတ် ရပ်တည်ပြီး အာဏာရှင်
အားဆက်လက်၍ တိုက်ပွဲ ၀င်နေဆဲ ဖြစ်သည် ။။အခမ်းအနားတွင် NCUB /MPU/NLD(LA)
DPNS/DAB/FTUB/KNU/BPPU/NCGUB နှင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးဦးသိန်းဦး
မှ NDF သည် NLD ကဲ့သို့ ပင် ဖြစ်သည် တိုက်ပွဲအားအဆုံးသတ်မတိုက်နိုင်သေးသော်ငြားလည်း
တော်လှန်ရေးအင်အားစု များ၏အင်အားအဖြစ် တော်လှန်ရေး ခရီးပေါ်တွင်ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ပေး
နေသောအဖွဲ့ ကြီးဖြစ်သည်ဟု တင်ပြသွားသည်။ NDF ၏ကျေးဇူးတရားသည် မိမိတို့ တော်လှန်ရေး
အင်အားစုများအတွက် ဆပ်မကုန်သော် ကျေးဇူးတရားဖြစ်ပါပေသည်။။
Posted by LRDP at 1:16 AM0comments Links to this post
(၁) ဗျာဒိတ်ခံယူသည့်နေ့ = လေး သင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်း အစ ကဆုန်လပြည့်နေ့။ သုမေဓါ ဘ၀
(၂) ဘုရားမွေးသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၆၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် (သောကြာနေ့)။ ( ဘီစီ ၆၂၃ )
(၃) ဘုရားဖြစ်သည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)။ (ဘီစီ ၅၈၈ )
(၄) ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်းဟောသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၄)ခု၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့။ ( ဘီစီ ၅၈၇ )
(၅) ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် (အင်္ဂါနေ့)။ ( ဘီစီ ၅၄၃ )
ဤနေ့ ဤရက်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့ ၏ အလွန်အင်မတန်မှ တန်ဖိုးကြီးမြတ်လှသော ရက်မြတ် ကဆုန်
ဖြစ်ပေသည် ။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ငယ်စဉ်က ညောင်ရေးသွန်း ပွဲ တော်စည်စည်ကားကားရှိလှသဖြင့်
မိမိ ၏ ဇာတိဖြစ်သော လယ်ဝေး မြို့ ကို သတိရ လွမ်းဆွတ်မိသည်မှလွဲ၍ သာမာန် ဥပုဒ် ကျောင်း သွား
ကြသည် လောက် ကိုသာ ထင်မှတ်ခဲ့သည့် အရွယ်ရင့်လာသော အခါ ဤ မျှ မြင့်မြတ်လှသော နေ့ ရက်
သည် ကျမ တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့တရားထူးတရားမြတ် များနှင့် မွေ့ လျော်၍ နေသင့်ပေသည်။။
လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ တို့ အား အလင်းပြပေးခဲ့သည့် ဘုရား ရှင်၏ တိုက်ဆိုင်လှသော် ရက် မြတ်များ
တွင် ကဆုန်လပြည့် နှင့် ၀ါဆို လပြည့်သည် အင်မတန် မှမြင့်မြတ် လှပေသည် ။
လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေ ထူပြော လှသည့် ဟောဒီ့လောကကြီး အား ချွန်း နှင့်တူသည့် ငါးပါးသီလ
နှင့် မဂ္ဂင် ၇ှစ်ပါးကို ညွှန်ကြားပေးခဲ့မှုမှာ အင်မတန်မှအဖိုးမဖြတ်နိုင်သော တန်ဖိုးဖြစ်ပေသည်။အကယ်၍သာ
ဘုရားရှင်၏တရားတော်များမရှိခဲ့ပါမူဤလောကသည် သည့်ထက်မက သောကတွေ နှင့်ကြေမွနေကြမည်မှာ
အမှန်ပင်ဖြစ်ပေသည် ။ သို့ အတွက်ကြောင့် ဘုရားရှင် ၏ကျေးဇူးသည် ပထမ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်
ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သည့် မိဖ နှစ်ပါးသည်ဒုတိယ ထေရ၀ါဒ ၏ အနှစ် များအား လက်တွေ့ ကျသော ဘုရားရှင်၏
အဘိဓမ္မာတရားများနှင့် ညွှန် ကြားသင်ပြခဲ့သော ဆရာတော် ဦးတိလောက ဘိဝံသ(ရွာမပရိယတ္တိ)ဆရာ
တော်အား တတိယ ကျမ ဦးချ ရိုကျိုးရှစ်ခိုး လိုက်ပါသည် ။။ မြတ်သော်ဤ ရက်ဤအခါတွင် ကျမ တရား
နှင့်မမွေ့ လျော် ၀ိပသနာ ကိုအားမထုတ်နေနိုင်သော်လည်း တရားသော် လောကအလုပ်နှင့် စိတ်ကောင်း
နှင့်ယှဉ်သော ၀ိတက် ၀ိစာရ တို့ အတူ လူဟု တွင်သော် လူဆန်သည့် လူဖြစ်ရန် ကြိုးစား နေပါသည် ။။
Posted by LRDP at 12:04 AM0comments Links to this post
အန်တီ့ အိမ် နှင့် နိုင်ငံခြားသားအဖမ်းခံရသည်ဆိုသည့်နေရာ (လိမ်လည်မှုအားသုံးသပ်နိုင်ရန်)
Posted by LRDP at 9:45 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 7:37 AM0comments Links to this post
Aung San Suu Kyi has been held under house arrest for more than 13 of the past 19 years [AFP]
An American man has been arrested in Myanmar for allegedly entering the home of Aung San Suu Kyi, the country's detained opposition leader.
The man, identified as John William Yeattaw, reportedly swam across the Inya Lake in the former capital Yangon, and spent two days hiding in the opposition leader's compound.
He was fished out of the lake by police early on Wednesday as he attempted to swim back from the opposition leader's lakeside home, the Myanma Ahlin newspaper reported.
The report gave no details of his motives.
It is thought to be the first time anyone has successfully sneaked into Aung San Suu Kyi's compound or swam across the lake in an attempt to get there.
More than 20 police entered Suu Kyi's compound on Thursday morning, according to neighbours who spoke on condition of anonymity.
The house is monitored by heavy security with checkpoints and barbed-wire barricades, but police rarely enter the actual compound where she has been kept under house arrest for more than 13 of the past 19 years.
She is not allowed visitors, apart from her
Posted by LRDP at 12:50 AM0comments Links to this post
ဤ သို့ ဆိုလျှင် ကျမ တို့ခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံ ရေး ကို အင်မတန် မှ
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည် ။ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်
နေသည်ဟု ကမ္ဘာ ကိုကြွားလုံးထုပ် နေသော စစ်အုပ်စု ဤကိစ္စအား ဖန်တီးသည်
လားဟု ပင် သံသယ ၀င်မိပါသည် ။။မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ နိုင်ငံခြားသား ဤ
သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းကလည်း ကျမတို့ ခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင် လက်ခံ နိုင်မည်
မဟုတ် ခေါင်းဆောင်၏စိတ်ဓါတ်ကို ကျမ တို့သိပါသည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အား ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်း ထားသော်ငြားလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဘ၀နှင့်
အသက်၏ လုံခြုံရေးကို လက်လွှတ်စံပါယ် ထားသည် ။ ထို့ အပြင် ထိုကိစ္စမျိုးရှိခဲ့ 
သည်ဟု အကြောင်းပြ၍ ကျမ တို့ ခေါင်းဆောင် ကို အချိန်မရွေး လုပ်ကြံနိုင်သည်
ကို ပြည်သူတို့ သတိပြုမိဖို့ လိုသည်။။ ခေါင်းဆောင်ကို ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ေ၇ှာက် ကြပါ။
Posted by LRDP at 12:26 AM0comments Links to this post
ကိုအောင်ဒင် အဖေ ကွယ်လွန်ခြင်း အတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ဗကသ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂ မှ ကိုအောင်ဒင် ၏ ဖခင်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်
၀မ်းနည်းကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည် ။ အမိအဖ များနှင့်ဝေးကွာနေရသော တော်လှန်ရေး
အင်အားစုများအားလုံးအတွက် မိမိ ခံစားချက် နှင့်ထပ်တူထပ်မျှ ကြေကွဲ ရပါကြောင်း
Posted by LRDP at 8:46 PM0comments Links to this post
မခံချင်စိတ်ကြောင့် နိုင်ငံရေးလုပ်သည် ။ မတရားတာကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင် ၍
နိုင်ငံရေးလုပ်သည်ခေတ်သမိုင်း၏ရေစီးတွင် ကိုယ့်သက်တန်းနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်၍
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း လူဆန်ချင် ၍နိုင်ငံရေးဝင်လုပ်သည်။ နိုင်ငံရေးကိုဝါသနာပါ ၍
လုပ်သည်။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီး နှင့်ယုံကြည်ရာဝါဒကို မျိုးစေ့ချ၍
နိုင်ငံရေးလုပ်သည်/အာဏာရှင်တို့ ၏စရိုက်ဆိုးကို မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ခံစားတွေ့ ရှိခဲ့
ရ၍ အာဏာရှင် မကျမချင်း နိုင်ငံရေးဝန်းထဲမှ နေ၍ တော်လှန်ရေးမှ နိုင်ငံရေး
အသွင် ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်တည် ခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ ရေးလုပ်သူ အားလုံး အားလုံးနှင့် အတူ
ခေါင်းဆောင် မှု နေရာရရှိနေသူများ အထူး သတိထား ဖွယ်ရာ နိုင်ငံရေးသမား
ကမ်းနားသစ်ပင် ဆိုသည်မှာ မမေ့သင့် မမေ့အပ်ရာပါ ။။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အာဏာယစ်မူးနေသည်မှာ လူတိုင်း အော့နှလုံးနာစရာ ဖြစ်နေကြ
သည်။။ သူကတော့နာမည်ပျက်ပြီးပြီ အဖက်ဆယ်စရာ မရှိပေ။
သူ့ မြေးမွေးကင်းစ ကလေးငယ် ကိုပင် အလေးပြုခံ သည့် ခုံတွင် တင်ပလ္လင်ခွေ
ထိုင်ခိုင်း စေခဲ့သည်မှာ ခါးမခိုင် အသိမနိုင်သေး သည့် သူ့ မျိုးဆက်အား အာဏာရူး
ခေတ်သမိုင်း နှင့် ယှဉ်၍တွေးမည်ဆိုလျှင် အာဏာရှင် ကို တိုက်ရင်း အာဏာရှင်
စိတ်ဓါတ်ဖြစ်သွားသော သူများ နိုင်ငံတစ်ချို့ တွေ တွေဒု နဲ့ ဒေးတွေ့ နိုင်ပါ သည်။
ဒီအတုတွေယူသင့်သေးသလား စဉ်းစားသင့်ကြပါပြီ ။ အာဏာ ဟူသည့်ဝေါဟာရသည်
အင်မတန်ကြောက်လန့် စရာကောင်းသည် ။။
အာဏာပါးကွက်သားအမိန့် အာဏာ အာဏာရှင်အာဏာရူး ဘယ်မှာ ကောင်းမည်နည်း ။။
ကမ္ဘာလောကကြီးက မတရားမှုဟူသမျှကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်သေး သည်
သာရှိမည် ထင်ရှားအောင်တော့ မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ကြသည် ။။
ပညာဟူသည်မြတ်ရွှေအိုးဥစ္စာဟူသည်မျက်လည့်မျိုး ဆိုရိုး၇ှိသကဲ့သို့ အာဏာသည်ဥစ္စာ
နှင့်တူပေသည် ပညာဆိုသည်မှာ PHD ဘွဲ့Dr ဘွဲ့ ကို မှမဟုတ် အသိပညာ အလိမ္မာနှင့်
ဆင်ခြင်ထုံတရား ပင် ဖြစ်ပေသည်။
နှင့်ယှဉ်သည့် ဥာဏ်နှင့်ယှဉ်ခြင်းသည်သာလျှင် သာမာန်ထက်ရှည်လျှားမည့် သြဇာတစ်ခု
သို့ သော် နိုင်ငံရေးအာဏာဟူသည်ကား ကြာကြာထား၍ မသင့်သော နေရာပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် စနစ်မှန်ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီ သည်သာလျှင် အာဏာရူးခြင်း ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သော
အကောင်းဆုံးစနစ် တစ်ခု ဖြစ်သည် ။
လက်တွေ့ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးမြန်မာပြည်၏နှစ်နှစ်ဆယ်ခရီးသည်ထင်ရှားသောသာဓက ဖြစ်သည်။
အာဏာရှင်စိတ်ဓါတ်တွေမပေါ်ပေါက်ရန် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
ယုံကြည်ချက် နဲ့ဂုဏ်သိက္ခါ ?
သိက္ခါ နှင့်ရိက္ခါ ?
နောက်လိုက်ကောင်း ၏ တန်ဖိုး? တို့ ကို ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမည်။
Posted by LRDP at 1:25 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 11:15 PM0comments Links to this post
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက် တွင်ကျင်းပသည့်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာတို့ ရဲ့ မေဒေးပွဲ
ထိုင်းလွှတ်တော်ရုံးရှေ့မှ ထိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ရှေ့သို့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများတောင်းဆိုသည့်
လမ်းလျောက်ဆန္ဒပြပွဲတွင် ထိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂများ နှင့့််အတူ ရွှေ့ပြောင်းကရင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂ
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြသည့် မေဒေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သည်။။
Posted by LRDP at 10:27 PM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အားပြည်တွင်း တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှထောက်ခံ
Posted by LRDP at 10:11 PM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအလုပ်သမားအစုအဖွဲ့ ၏ မေဒေး နေ့ ကြေညာချက်
Posted by LRDP at 6:58 AM0comments Links to this post
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန်းစန်း မှ မေဒေး နေ့အခမ်းအနားသို့ 
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ခွန်မြင့်ထွန်း မှ အလုပ်သမားအားဆုချီးမြှင့်စဉ်
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်(FTUB)မှ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် မထွေးငယ် အလုပ်သမားအားဆုချီးမြှင့်စဉ်
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးများမှာရခိုင်ရိုးရာအက နှင့် ကြွရောက်လာသောအလုပ်သမားများအား ဖြေဖျော်
မေဒေး နေ့ အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရောက်ရှိလာသော အလုပ်သမားများတော်လှန်ရေးအင်အားစုများ
အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ကို FTUB မှ အတွင်းရေးမှု ဦးမင်းလွင် နှင့်
JACBA မှ ဥက္ကဌ ဦးမိုးကြိုး တို့ မှ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး အလုပ်သမားနှစ်ဦးမှ အလုပ်သမားများ ခံစာချက်
နှင့် ကိုယ့်အခွင့်အရေးရှိတာကို နာလည်ကြရန် စုပေါင်းတိုက်ပွဲ ၀င်ရန် တိုက်တွန်းပြောကြားသွားပြီး
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်မြင့်ထွန်း မှ အလုပ်သမားများ ရွှေ့ ပြောင်းလုပ်ရသည့် ဘ၀
အခြေခံ ဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာရသည် ထိုထဲ မှ ရွှေ့ ပြောင်းလုပ်နေရသော ဘ၀ တွင် မည်သို့ သင်္ခန်းစာ
ယူခဲ့သင့်သည် ..တို့ ကိုဟောပြောသွားပါသည်။။ ထို့ နောက် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ မှ
အလုပ်သမားရေးနှင့်ဆိုင်သော ပဟေဌိ မေးခွန်းများမေးပြီး ဖြေဆိုနိုင်သူများအား ဆုချီးမြှင့် ခဲ့ ကြသည်။။
ထို့ နောက် မေဒေးနေ့မှရရှိသော ရလဒ် ဖြစ်သည့်၈ နာရီနား ၈နာရီပျော် ၈နာရီ လုပ် ကို